Ummanni Turkiyaa filannoo prezdaantummaa fi miseensota paarlaamaatiif sagalee kennuu jalqabe - NuuralHudaa
Manni Marii Ulamaa Itoophiyaa, Koree Boordii Hojii Raawwachiistuu Majlisa Federaalaa hojjii irraa ugguru gabaafame
Ummanni Turkiyaa filannoo prezdaantummaa fi miseensota paarlaamaatiif sagalee kennuu jalqabe
Turkiyaan rifarandamii bara dabre geggeessiteen bulchiinsa biyyattii sirna paarlaamentii irraa gara prezdaantummaatti eega jijjiirteen booda, ummanni biyyatti Alhada har’aa yeroo jalqabaatiif Prezdaantii isaa kallattidhaan filachuudhaaf sagalee kennuu jalqabe. Dabalataanis Filannoon miseensota paarlaamaatis har’uma kan geggeefamu tahuun beekamee jira.
Paartiileen siyaasaa saddeet filannoo kana irratti kan hirmaataa jiran yoo tahu, kaadhimamtoonni prezdaantummaa jaha ammoo waldorgommiif dhihaatanii jiru. Kaadhimamtoota prezdaantummaaf dhihaatan jidduu Mr Muharram Ince prezdaant Rajab Xayyib Erdogaaniif morkataa cimaa ni ta’a jedhamee kan tilmaame tahuu gabaasni arganne ni mul’isa. Prezdaant Erdogan paartii Haqaa fi Dagaaginaa (AK party) jedhamu bakka bu’uun kan dorgomu yoo tahu, Mr Muharram Ichee ammoo paartii Republican people’s party jedhamu bakka bu’uun dhihaate.
Prezdaant Erdogaan magaalaa Istaanbul keessatti Sabtii kaleessaa duula na filadhaa geggeesse irratti “Taayitaan prezdaantummaa muuxannoo guddaa barbaada” jechuun morkataa isaa Mr Muharram Ichee Turkiyaa hoogganuudhaaf muuxannoo gayaa hin qabu jechuun qeeqe. Mr Muharram gama isaatiin “guyyaa boruu irraa jalqabee Turkiyaan biyya addaati” jechuun filannoo kana injifatuun taayitaa prezdaantummaa qabachuudhaaf abdii qabu ibsate.
Filannoo guyyaa har’aa geggeefamu kanaan kaadhimamaan Prezdaantummaa tokko sagalee 50% ol yoo hin argatin filannoon marsaa lammaffaa July 7/2018 kan geggefamu tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Lammiileen Turkiyaa heddu filannoon ammaa kanaan Prezdaant Erdogaan yoo kan injifatu tahe, dhageettiin Turkiyaan addunyaa keessatti qabdu daran ol guddata abdii jedhu kan qaban tahuu gabaasni Aljaziiraa irraa arganne ni mul’isa.
January 27, 2021 sa;aa 9:51 pm Update tahe
Aalimni Guddaan biyya Keenyaa Sheikh Muhammad Aadam Wolloo gara ganda Akhiraa godaanan
Du’aa’iin akkamitti qeebalamti?